Ku soo dhawaw bogaggeenna Soomaaliga. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa nidaamka waxbarashada Swiidhishka, hawsha ku aadan habka waxbaridda gaarka ah ee hey'adda dugsiyada iyo dugsiyadeenna gaarka ah.
Swiidhan dugsiga hoose-dhexe waa khasab waxaana uu ka koobanyahay sagaal sanad dugsiyeed. Ardayda u baahan dugsi kale oo hoose-dhexe waxaa jira dugsi hoose-dhexe oo loogu tala galay carruurta maskax ahaan dhimman iyo dugsi gaar ah.
Wax badan kasii akhriso nidaamka waxbarashada Swiidhishka
Hey'adda dugsiyada ee habka waxbaridda gaarka ah (SPSM) waxaa ay ka shaqeysaa in canugga, dhalinyarada iyo qofka weynba iyadoon loo eegeyn karaankooda maskax ahaaneed, ay helaan duruufo u saamaxaya in ay gaaraan hadafka waxbarashadooda. Taas waxaannu ku sameyneynaa annagoo adeegsaneyna taageero la xiriirta habka waxbaridda gaarka ah, dugsiyo gaar ah wax ku dhigid, kaalmada xukuumadda iyo qalabka waxbarashada ee la heli karo.
Wax badan ka sii akhriso hawsheenna iyo dugsiyadeenna
Nal soo xiriir
Publicerat måndag 2 januari 2017 Granskat torsdag 9 augusti 2018